Mpitandrina ho an'ny ankizy
Toa maro dia maro no afaka manasa zaza ho an-janaka fotsiny. Ary raha ny tena izy dia, satria tsy ny rehetra no mandoa ny asa ho an'ny anny ankizy. Na izany aza, isan-taona any amin'ny firenentsika dia miha-henjana hatrany ny fianakaviana.
Noho izany, raha noho ny asanao, na noho ny antony hafa dia mila mamporisika ny zanakao amin'ny olon-kafa ianao, vonona ny hanampy anao amin'ny torohevitra, ny fomba tsy fanaovana fahadisoana amin'ny fisafidianana kilalaka.
Aiza no mety hahitako zaza ho an'ny zaza?
Misy safidy maromaro hamahana ilay olana. Ny fomba tsotra indrindra dia ny manasa olona iray avy amin'ny havana (tsy anana nenitoa, mpianatra tsy fantatra, sns.). Nefa amin'ity tranga ity dia misy ihany koa ny fandrika. Ny havana dia sarotra ny manala azy, avy aminy saro-piandry mangataka ny fanatanterahana ny andraikiny, ary noho izany dia mety hisy ny olana sy ny fanararaotana.
Ny safidy manaraka - hanangona kilemaina amin'ny fanolorana namana. Ny tombony dia ny fahatsaram-pahefana azo itokisana, ary ny tsy fitoviana dia mety tsy hiasa tsara aminao izy, na tsy hifandray amin'ny zanakao. Saingy, na ahoana na ahoana, dia azonao atao foana ny mandà azy, ary mahita tovovavy vaovao.
Ary ny fomba fahatelo dia ny haka ny antsy amin'ny dokambarotra. Izany no safidy sarotra indrindra, momba ireo rehetra voalaza. Miomàna ianao fa tsy maintsy mandany volana mihoatra ny iray volana ianao mba hitadiavana ny tovovavy mifanaraka aminao.
Ahoana no fomba hifidianana ankizy ho an'ny zaza?
Raha mbola tsy nikarakara ny zaza vao teraka ianao dia mila mamaritra ny lisitry ny fepetra napetrakao amin'ireo kandidà. Hisy lisitra sasantsasany amin'ireo toetra tokony hananan'ny tovovavy tsara.
Noho izany, tokony hodinihinao ny taonan'ny mpitsabo. Tsy resaka fitsipi-pifehezana izany, fa ny vehivavy 60 taona dia tsy azo atao hanaraka tombom-barotra roa taona;
kalitao ny mpitsabo mpanampy. Ny mpitsabo mpanampy amin'ny fampianarana ara-pitsaboana na ara-pitsaboana dia mitaky. Ny fahalalana ny fiteny vahiny eo amin'ny kandidà misy dia mandray foana;
ny fahasalaman'ny mpitsabo mpanampy. Sarotra ny manamarina izany, saingy azo atao foana ny maka tombontsoa amin'ny fahasalamany sy ny fisian'ny fluorographie;
Ankoatra izany, mazava ho azy fa tokony ho tsara fanahy ny anahy, hitady ny fomba fijerin'ny ankizy, mitandrema, mahalala fomba. Tokony hanolo ny zaza amin'ny ankamaroan'ny fotoana miaraka amin'ny reniny izy, koa aoka izy ho olona mendrika eo akaikiny;
Zava-dehibe koa ny fiatrehan'ny fihaonana voalohany amin'ny ankizy miaraka amin'ny zaza. Azonao atao ny mamaly ny andro voalohany amin'ny voalohany mba hahatakatra fa tsy mifanaraka aminao ny anahy. Tandremo ny fomba fijeriny an'ilay zaza, na tena liana amin'ny fananganana fifandraisana izy, na ny zavatra ataony dia tsy mihoatra ny adidy tsotra.
Matetika ny ray aman-dreny no liana amin'ny fomba ampianarana ankizy amin'ny ankizy. Nefa miandrasa! Nahoana no fampiofanana? Raha tsy mahazo aina amin'ny zaza ny zazakely, tsy tsara kokoa ve ny mahita iray hafa?
Tadidio fa mahatsapa ny olona ho tsara kokoa noho ny antsika ny zanatsika. Ary raha samy noho ny antony manosika sy mato-tsaina, dia mety tsy mifanaraka amin'izany izy ireo.
Aza avela tsy hiangona ny fanamarihan'ny ankizy momba ny tsy manara-maso. Mampalahelo fa misy fotoana ny ankizy mamono ankizy. Tsy fahita firy izany, saingy tsy misy olona te ho eo amin'ny toe-javatra iray izay hanaraby ny zanany vavy. Henoy hatrany ny zavatra lazain'ny zanakao mikasika ny aterineto, ny mpifanolo-bodirindrina aminao (mety ho hitan'izy ireo mihoatra noho ny ataonao). Afaka miditra ao an-trano ianao amin'ny fotoana tsy ampoizina, jereo ny kilasinao amin'ny telefaona. Aza matahotra maneho ahiahy. Momba ny fiarovana ny zanakao izany!
Ankizy iray ho an'ny ankizy roa - azo atao ve izany?
Azonao atao ny mamaly hoe tsy misy tsy azo atao. Raha ny marina dia maro ny reny miara-maso amin'ny ankizy roa, ary manao devoara koa. Saingy ny mamanay, afaka manao zavatra maro izy ireo. Noho izany, raha kely ny ankizy dia tsara kokoa ny manana ny olon-tiany. Fa ho an'ny ankizy efa latsaky ny 5 taona, dia iray kilasy iray ho an'ny roa no tena mety.
Ny sarin'ny ankizy
Ahoana ny hiatrehana ny nepohuchoy?
Ahoana ny fomba fisarahana amin'ny zaza miaraka amin'ny rainy?
Nahoana no tsy mihinana tsara ilay zaza?
Ny zanakavavin'i Steve Jobs
FEMP amin'ny tarika junior faharoa
Ny zanakavavin'i Michael Jackson
Fisotroana rano fisotro madio
Ahoana no hanamboarana lasopy avy amin'ny duck?
Taratasy avy amin'ny savony
Kitapo misy ronono amin'ny ronono
Sakafo avy amin'ny cookies
Keratitis amin'ny maso
Rahoviana ny zaza maneho ny ranomaso?
Sakafo mitambatambatra eo amin'ny multifarka
Mandoko rindrina amin'ny loko roa
Yoga - fofona
Ririnina Winter 2017